Xiddiga Man Utd Marcus Rashford oo ka hadlay ka dib markii cunsurinimo lagula kacay ciyaartii Arsenal
Home Horyaalka Ingiriiska Xiddiga Man Utd Marcus Rashford oo ka hadlay ka dib markii cunsurinimo...
Nasiib darro waxaa jiray marar badan oo ciyaartoy xirfadleyaal ah oo ku takhasusay cunsuriyadda usbuucii la soo dhaafay sida Axel Tuanzebe, Anthony Martial iyo Reece James ayaa ah seddex magac oo ay soo gaareen dhibaatadii foosha xumayd Hadana Marcus Rashford ayaa si cunsurinimo ah ayaa loogu xadgudbay.
Faallooyin xun ayaa laga siiyay xiddiga United ka dib barbaro ay 0-0 la galeen Arsenal fiidnimadii Sabtida Rashford ayaa khadka Twitterka kaga hadlay xadgudubka.
Wuxuu qoray: Aadanaha iyo warbaahinta bulshada markii ugu xumeyd. Haa waxaan ahay nin madow waxaanan ku noolahay maalin kasta waan ku faanaa inaan ahay Ma jiro qof u jabaabayo ama qofna faallo ka bixin maayo, oo aniga iga dhigaya wax ka duwan Markaa waan ka xumahay haddii aad raadineysay jawaab celin xoog leh, kaliya ma ahan inaad halkan ku hesho ayuu yiri Rashford.
Horyaalada ugu waa weyn caalamka ayaa inta badan lagu arkaa iyadoo xidigaha madowga ah lagu aflagaadeynayo haba ugu darnaadee kan ingiriiska ee premier league inkastoo La ganaaxo hadana ma noqon mid ay ku tusaale qaateen.
Previous articleBarcelona oo caqabad ku tahay heshiiska Messi
Next articleBarcelona oo lacago badan ku bixisay sidii ay ku heli leheed bedelka Neymar balse ma dhicin.